IMIBONO YOMGANGATHO WEKHITSHI KUHLAHLO-LWABIWO MALI - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Imibono yoMgangatho weKhitshi kuHlahlo-lwabiwo mali
Nazi izimvo zethu ezilungileyo zomgangatho wasekhitshini kuhlahlo-lwabiwo mali kubandakanya okuhle kunye nolubi kuhlobo ngalunye.
Ah, ikhitshi. Umsebenzi wendlu, umntu odla uhlahlo-lwabiwo mali xa kusenziwa ukulungiswa, igumbi apho abantu bahlangana khona ukuze bancokole kwaye badle ngelixa ugqibezela loo holide yeholide. Ifuna ukutyibilika okunokuma kuyo nantoni na oyiphosayo kwaye nokomgangatho kufuneka uhlale ixesha elide. Ukuba uhlahlo lwabiwo-mali, unokucinga ukuba awukwazi ukufikelela kumgangatho omnandi kwaye omeleleyo. Kodwa, ngeendlela ezininzi ezikhoyo ngoku, unokufumana i-flooring efikelelekayo eya kuhlala ixesha elide.
Ikhokho. Ikhokho inokuba sesiphelweni esiphezulu somgangatho wohlahlo-lwabiwo mali, kodwa ndive. Kuya kufuneka uye kwiindawo ezingaphezulu kwenye, kodwa unokufumana ikhokho malunga ne- $ 3.00 ngonyawo wesikwere ukuba unyamezele. Ikhorki intle, kwaye ndinokuba nomkhethe kuba ndinayo ekhayeni lam, kodwa intle ngokwenene.
Ukuhlala ixesha elide? Ikhorki inayo kwaye ezinye. Kulula ukuyicoca, vele uyitshayele, uyityabule ngaphambi kokuba ibala. Ndiyakwazi ukutshabalalisa ngenxa yokuba i-porous, kodwa loo nto inokuthintelwa lula nge-sealant. Ungayijonga ibhokisi elungele indalo esingqongileyo njengoko ikhokho ikhonkxa nje echetyiweyo emthini ngaphandle kokuyonakalisa kwaye ibekwe kunye nentlaka yendalo kwiimeko ezininzi, njengamaxesha onke, jonga umenzi njengoko iikhokho zase China zihlala zine-carcinogens.
Umgangatho wekhorki yi-hypoallergenic kwaye ineepropathi zokulwa ne-antimicrobial kwaye ngokwendalo iyazigxotha ezirhubuluzayo ezinqabileyo, isenza ukhetho olufanelekileyo ekhitshini. Ikhork ingacokiswa xa kukho imfuneko, ndineminyaka eyi-10, nangona kunjalo kunzima kumgangatho wethu, kwaye kusafuneka iphinde icokiswe.
Sisixhobo esihle sokwambathisa, esenza ibhajethi ephindwe kabini ngokunceda ukugcina iindleko zakho zokufudumeza nokupholisa ziphantsi. Kodwa mhlawumbi eyona nto intle malunga nekhokho, ngaphandle kwendlela emnandi ngayo, yindlela entle ngayo ukuma phezu kwayo. Ikhokho ivakalelwa ngathi ithambile kwaye inentwasahlobo, kulula emadolweni, yimpembelelo esezantsi ukuhamba kule yodongwe okanye ukhuni, kwaye iziva ilungile kwezi seshoni zokupheka zinde kakhulu. Ke, ngelixa inokuba kwisiphelo esiphezulu sohlahlo-lwabiwo mali ekuqaleni, ukonga kumandla kunye nenyani yokuba awusoze uphinde uyibuyise yongeza ngakumbi ibuck yakho.
I-stand-by-old ye-vinyl flooring, isoloko inobuhlobo kuhlahlo-lwabiwo mali, ayisoloko imangalisa. Kodwa kwakungoko, i-vinyl flooring entsha ihambe indlela ende ukusukela ngeminyaka yee-1970, okanye kwa-1990. Unokufumana i-vinyl ejonge malunga ne- $ 0.50 ngonyawo wesikwere. IVinyl ifumana amanqaku ebhonasi ngokungafuneki ukuba ungaphantsi, ungayibeka kanye phantsi komgangatho ongaphantsi.
Imibala yomtshato amacebo okuwa
Umgangatho weVinyl uza kwimakhishithi, iiplanga, kunye nokuxobuka kunye nokunamathela kwiithayile kwaye kulula kakhulu ukuzifakela ngokwakho. Umgangatho weVinyl uza kuyo yonke imibala onokuyicinga kunye nemibala eliqela ongayaziyo nokuba ikhona! Iipateni, nazo! Ingakhangeleka okomthi, ithayile yeediliya, imabhile, igranite, kunye neLego's. Ngenye yeendlela ezikhethwe ngokulula ngaphandle phaya kwaye uyithandayo nakwabaqulunqi beziphelo eziphezulu ngenxa yendlela eguquguqukayo ngayo kumba wokwenza ujongo.
IVinyl kulula ukuyinyamekela, vele uyikhuphe ngesepha encinci kunye namanzi. Jonga izilwanyana zasekhaya nangona, i-vinyl inokukrwitshwa ngokulula kwaye ikrishwe. Kodwa ilunge kakhulu kuhlahlo-lwabiwo mali, ngekhe ibeyinto ukubuyisela iplank okanye ezimbini ukuba ziyafuneka.
Enye yeendlela ezinokumangalisa ngakumbi zokwenza uhlahlo-lwabiwo mali lwekhitshi ngumthi weHickory. Umthi onzima awucingelwa njengolungele uhlahlo-lwabiwo mali, kodwa le mithi ifumaneka ngaphantsi kweedola ezi-3 ngonyawo wesikwere. Ngenxa yoxinano nobulukhuni beHickory, inxibe ixesha elide kwaye yomelele.
Ipateni yokutya okuziinkozo yeHickory ayilibaleki, ibhalwe kakhulu, kwaye ibalaseliswe nangayiphi na into oyikhethileyo. I-Hickory inokubomvu, i-tan elula, kwaye ibe mnyama, ityebile emdaka, iyenza isihlangu-nokuba isitayile sakho sokuhombisa sithini. Thenga ujikeleze ukuze ufumane elona xabiso liphezulu, iinzame zakho ziya kuvuzwa xa unxiba ikhitshi lakho elinobuhle kuhlahlo-lwabiwo mali kumgangatho oqinileyo.
Unokufumana iithayile zekheramali yoqingqo-mali ekhangeleka kwiindidi zemibala eyahlukeneyo, iimilo kunye noyilo. Ezi tile zihlala zomelele kwaye zinokucocwa ngokusebenzisa isepha esincinci kunye namanzi. Iithayile zeceramic zohlahlo-lwabiwo mali zinokufumaneka malunga ne- $ 1.00 ngeenyawo zenyawo nganye nangaphezulu.
Sebenzisa iithayile zeceramic ekhitshini zilungile kuba ziyakwazi ukumelana nokuchitheka, kunye nokugcwala kweenyawo ezinzima. Ukongeza, azifunxisi ivumba okanye ibhaktiriya ezenza ukuba zibe luncedo kwiintsapho ezinkulu okanye amakhaya anezilwanyana zasekhaya. Icala elisezantsi ekusebenziseni iithayile zeceramic kukudibana kwamalungu kunokuba nzima ukuwacoca ngaphandle kokuba uthathe ukhathalelo olukhethekileyo ukutywina ngokufanelekileyo.
Umgangatho olaminethiweyo wenziwe ngentsimbi eyomeleleyo engenakho okomeleleyo kwizinto ezinokusetyenziswa ekhitshini. Nangona kunjalo, ngelixa i-laminate flooring ihlala ixesha elide ngokuchasene nokukrwela kunye nokunxiba, inokuba semngciphekweni wokonakaliswa ngamanzi. Oku kunokwenzeka xa amanzi ehamba phakathi kweeplanga kwaye kunokubangela ukubetheka kunye nokujijisana. Ukuthintela oku kufuneka asebenzise inkathalo ukungamanzisi i-mop laminate flooring okanye avumele amanzi amileyo ukuba aqokelele.
umbono wegumbi lamantombazana
Kulabo bazimisele ukutyala imali encinci kukho uhlobo lwezinto ezingamanzi ezinganyangekiyo ezinokubonelela ngokhuseleko olungcono kwindawo emanzi. Kumgangatho oqhelekileyo wohlahlo-lwabiwo mali olumgangatho ophakathi indleko ngeenyawo zijikeleze i-1.10 yeenyawo ngomgama. Ngohlobo olomeleleyo lwamanzi olomeleleyo kunokubiza i- $ 3.00 nge-ft okanye nangaphezulu.
Ukusebenza nohlahlo-lwabiwo mali kunokukhathaza, unokuziva ngathi ukhetho lwakho luthintelwe kwaye awunakuba nawo umgangatho wamaphupha akho. Kodwa ngoluhlu olubanzi lwezixhobo ezikhoyo, uhlahlo-lwabiwo mali oluncinci akufuneki luthethe imida.
Ngaba uza kuyifumana loo migangatho yeethayile zegranite kuhlahlo-lwabiwo mali? Hayi, kwaye xa ujonga indlela iithayile zegranite ezinokuthi zitshintshe ngayo kwaye zingcolise ibala, yinto ebhajethi ephindwe kabini ongafuniyo ukujongana nayo. Izinketho ezidweliswe apha kuphela kwendawo efanelekileyo yokwenza uhlahlo-lwabiwo mali olukhoyo, kodwa xa ucinga ngokuphila ixesha elide kunye nesitayile, zezona zikhetho zibalaseleyo. Ayizizo kuphela ezingabizi xa uzithenga, ziya kuhlala ubuncinci iminyaka elishumi, zihlala ixesha elide, ukuba zikhathalelwe ngokufanelekileyo, oko kuthetha ukuba iindleko zokutshintsha zinqunyelwe.
Uqalo sisixhobo esinexabiso eliphantsi esenziwe ngemigangatho esenza ukhetho olukhulu kuba sisixhobo esinokuhlaziywa. Kuba u-bamboo luhlobo lwengca inokuphinda ikhule ngokukhawuleza emva kokuba ivuniwe ukuyenza ibe lukhetho olunobungakanani bomhlaba. Ungayichazanga eyokutyala i-bamboo ngexabiso eliphantsi kwaye inokufumaneka nge- $ 2.00 encinci ngonyawo wesikwere.
I-bamboo flooring nayo kulula ukuyifaka kunye nemiphetho enqakraza kunye nokwenza ukhetho olufanelekileyo kwi-DIY'er. I-bamboo ayenzi kakuhle xa imanzi, ke kuya kufuneka ukhawuleze ucoce ukuchitheka ngokukhawuleza kwaye uphephe ifanitshala enokubangela ukukrwela kakhulu. Iipads zokuva zinokusetyenziselwa ukunceda ukukhusela i-bamboo flooring kwaye zibancede bagcine inkangeleko yabo yendalo.
Amanqaku ayiliweyo oyilo olungaphakathi onokuthi uthandwe:
Iindidi zeZinto zoMgangatho - Eyona migangatho ilungileyo yenja - Umgangatho we-Eco Friendly
indlela yokucheba phaya ezantsi ngaphandle kokufumana amaqhuma ezincakuba
izipho zekrisimesi zootata
Izimvo zokubhiyozela isikhumbuzo seminyaka eli-10
uyilo lwala maxesha lokuhlambela
izimvo zesipho somfazi